Danjiraha cusub Somaliya oo loo magacaabey Dallka Yemen Mudane Cabdullahi Xaashi Shuuriye oo nusqad waraaqihiisa aqoonsiga oo dhiibey wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda Yemen | Baydhabo Online
Danjiraha cusub Somaliya oo loo magacaabey Dallka Yemen Mudane Cabdullahi Xaashi Shuuriye oo nusqad waraaqihiisa aqoonsiga oo dhiibey wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda Yemen
Danjiraha cusub Somaliya oo loo magacaabey Dallka Yemen Mudane Cabdullahi Shuuriye ayaa maanta nusqad waraaqihiisa aqoonsiga oo dhiibey wasiirka ku xigeenka wasaarada arrimaha dibadda Yemen Mudane Dr. Mansuur Cali Bagaash.
Munaasabada waxey ka dhacdey xafiiska wasaarada arrimaha dibadda Yemen ay ku leedahay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga waxaana goob joog ka ahaa Amina Ikow oo ah xoghaya koowaad safaarada Somaaliya ay ku leedahay dalka Sacuudiga iyo saraakiil ka tirsan wasaarada arrimaha dibadda ee Yemen.
Danjire Cabdullahi Shuuriye iyo wasiir ku-xigeenka waxey ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada wadan Soomaaliy iyo Yemen, wuxuuna u gudbiyey salaan uu uga sidey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dr. Mansuur wuxuu sheegey in Yemen iyo Soomaaliya ay ka mideysanyihii ladagaalanka argagixisada oo loo baahanyahay in ay hal meel uga soo jeestaan. Wuxuuna sheegeey iney soo dhoweynayaan danjiraha cusub Mudane Cabdullahi Shuuriye ayna gacan ku siin doonaan si uu si habsami ah u guto howlahiisa.
Danjire Shuuriye ayaa ugu dambeyntii sheegey in dowlada Soomaaliya ay diyaar u tahay iney gacan siiyaan walaalahooda Yemen dhinac walba.